Na ị chọrọ ka gị agbamakwụkwọ / ncheta ma ọ bụ nwata ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ nke gị na ụmụ gị na-echeta na-eme ihe ngosi mmịfe nke photos. Ọ nwere ike na-eme ka ndị nostalgic mmetụta gị mgbe ọ bụ a ọjọọ oge nke na-efu gị n'oge gara aga ụbọchị, ma ọ bụ ọ pụrụ ịbụ ihe ọzọ pụtara maka ụtọ na ezinụlọ. iPhoto dị nnọọ mfe aka na-eme ka a ngosi mmịfe. Nke a software abịa na ụfọdụ tupu arụnyere gburugburu maka slideshows, na i nwere ike tinye photos ha ka nwere ndị na ngosi mmịfe kwadebere. Ebe a bụ iPhoto ngosi mmịfe nkuzi igosi gị otú ị na-eme ka a iPhoto ngosi mmịfe, na na na na TV gụnyere gị Apple TV na nkọwa.
Part 1: Olee ka Slideshows na iPhoto
Part 2: Olee ekiri iPhoto ngosi mmịfe on Apple TV
iPhoto '11 na-eme ka bụ mfe na-eme ka a slide show. Dị nnọọ họrọ photos na ị chọrọ na-agụnye ke ngosi mmịfe, ma họrọ New ngosi mmịfe si File menu. I nwere ike mgbe ahụ pịnye a aha maka ọhụrụ kere ngosi mmịfe n'okpuru ngosi mmịfe udi.
Dị ka iPhoto-agụnye ụfọdụ gburugburu n'ihi na ị na-eme ka ihe ngosi mmịfe tupu imewe ekwekọghị, pịa Gburugburu button na-agagharị na ngosi mmịfe gburugburu na a ọhụrụ windows na họrọ mmasị otu. Pịa Họrọ bọtịnụ ide. Ị nwere ike ịdọrọ na dobe photos n'elu re-ndokwa photos. N'ihi ya, ị na-mere.
Melite a Custom iPhoto ngosi mmịfe
Site na ihe e tụlere n'elu, ị nwere ike nweta ihe ngosi mmịfe eji ndabara kpọrọ gburugburu iPhoto maka ngosi mmịfe. Otú ọ dị, na mgbakwunye na nke music na Mwube Njirimara na-atụle agụnye na n'ihu ntuziaka.
Nzọụkwụ 1: hazie gị Photo
Họrọ a ọhụrụ ngosi mmịfe si iyi panel. Ị nwere ike nweta foto maka ngosi mmịfe na a film warara na elu nke window. Ị nwere ike ijikwa na iji ma ọ bụ usoro nke slide dị nnọọ nanị site na-adọkpụpụta ihe ka mma oyiyi site thumbnails si foto iji na fim warara. Mgbe na-agbanwe agbanwe na iji nke otu foto, ọ ga-ịkpọgharịa na nyekwara.
Nzọụkwụ 2: Họrọ na Tinye Music Files
Ị nwere ike nweta Music ntọala mmanya jikwaa ọdịyo faịlụ maka ngosi mmịfe site na ịpị Music button na ala n'aka nri akụkụ nke window. Mkpa ka ị họrọ wedaa faịlụ site na isi iyi menu ịchọta music faịlụ na mbanye na ị chọrọ iji. Ị nwere ike nweta ụfọdụ wuru na-awụ ọsọ n'ugwu maka ngosi mmịfe, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ n'ọbá akwụkwọ na iTunes si ọkacha mmasị gị Mac.
Nzọụkwụ 3: Họrọ a Custom Duration
Ị mkpa ịhọrọ bọtịnụ Mwube, na ị pụrụ ime ka ụfọdụ iche iche ebe a site na nanị ị na-ahọrọ music. Ị nwere ike hazie oge maka a foto nke ngosi mmịfe na-egosipụta, ma ọ bụ i nwere ike ezukọta foto gị jidesie ogologo nke ọdịyo track mgbe ị ga-ekwe ka ọdịyo faịlụ na-egwuri na ngosi mmịfe ndabere.
Nzọụkwụ 4: mgbanwe maka Track Ogologo
Ị nwere ike nweta a dobe ala menu maka mgbanwe site na ịpị mgbanwe igbe. Ndabara mgbanwe bụ setịpụrụ na "igbari" mode. Ma ị nwere ike họrọ ihe ikwu n'ụzọ si nhọrọ. The "Adalata Site Black" mgbanwe bụ ukwuu irè n'ihi na ngosi mmịfe. Ị nwere ike ijikwa ma ọ bụ ịgbanwe Njirimara nke ikwu n'ụzọ si previewed dialog menu.
Nzọụkwụ 5: Họrọ a Mbụ maka ngosi mmịfe
Site ngosi mmịfe ọnọdụ panel, ị nwere ike nweta aha faili ma ọ bụ nyegharịa nhọrọ nke All slides menu maka foto niile ozugbo ma ọ bụ n'ihi ọ bụla foto ị nwere ike họrọ Nke a Slide menu na n'elu nke panel. Ndị a ga-enye gị ohere ịhọrọ ọnọdụ foto niile ma ọ bụ họrọ otu ma mgbe ọ ga ị a novice na ị na-ahọrọ dị iche iche mgbanwe dị iche iche photos. Ị nwere ike tinye ihe ọmụma dị ka ndị ọzọ nkọwa, ụbọchị na aha, wdg maka gị foto na ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 6: Mee ka a Mbụ Slide
Gịnị bụ aha slide? Ị nwere ike tinye a aha ahụ ga-abụ preview na ngosi mmịfe na mmalite ma na-mmasị na mbụ foto. Ọnọdụ nke slide aha-apụghị gbanwere, ma font ịke nwere ike gbanwere mfe na-esonụ ntuziaka.
Họrọ Text menu.
Jiri Wụk + T ka nwere ndị na Akara ókwú panel na-egosipụta.
Ugbu a ịgbanwe Akara ókwú Style maka Mbụ Slide.
Nzọụkwụ 7: ọnụ ọgụgụ Your ngosi mmịfe Photos
E nwere ụfọdụ ndị ọzọ menus na ala nke Ntọala panel. Ụzọ ma ọ bụ ụkpụrụ gị mkpa idozi foto gị na-egosipụta nwere ike-enyocha si "n'ọtụtụ Photos dabara ihuenyo". Nke a menu ga-ezere nwa Ogwe si n'akụkụ nke foto gị. Ma mkpa ka i cheta na a nhọrọ bụ dabere na ngwaọrụ ị ga-eji maka playback ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 8: Họrọ họọrọ ihuenyo Size
Site iPhoto ngosi mmịfe, ị nwere ike nweta ihe 16:10 akụkụ ruru dị ka ndabere nhọrọ. Ma mgbe ị na-akpọ ya na-a widescreen TV ma ọ bụ ileba anya, ị chọrọ ịgbanwe na ihuenyo size ka akụkụ ruru 16: 9 na mkpa ka ị ahọrọ kwesịrị ekwesị ihuenyo maka gị iPhone ma ọ bụ iPod Obere ma ọ bụ iPad na na na ya.
Otu mfe n'ọnụ n'ihi na Ị:
The nkiri size nwere ike ghara ịbụ ihe kwesịrị ekwesị maka ngwaọrụ na ọ nwere ike isi nnukwu. Otú ị chọrọ iji họrọ akụkụ dị ka kpọmkwem ngwaọrụ. Mkpa ka ị pịa ka Export button na nwere ike na ala nke window nke iPhoto. Ebe i nwere ike jikwaa akụkụ maka nkiri dị ka ngwaọrụ Njirimara.
The n'elu nzọụkwụ nwere ike inwe ị a nnọọ mfe, ngwa ngwa na keukwu ngosi mmịfe maka foto gị kwesịrị ekwesị maka playback ngwaọrụ. Get mmasị na ntuziaka ma tinye gị mma ikike ihe ọmụma na nke kacha mma uto si ngosi mmịfe.
Na-ekiri iPhoto ngosi mmịfe on Apple TV, ị nwere ike mmekọrịta iPhoto ngosi mmịfe ka Apple TV na iTunes. Mbupụ ngosi mmịfe ka iTunes, akpa họrọ Export si File menu na-aga ngosi mmịfe taabụ. Họrọ AppleTV na n'ikpeazụ pịa Export bọtịnụ iji malite e kere eke.
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ "Akpaghị aka izipu ngosi mmịfe ka iTunes" nhọrọ, exported ngosi mmịfe ga-atụkwasịkwara iTunes, nke-enye gị ka mmekọrịta iPhoto ngosi mmịfe ka Apple TV maka playback.
Ozugbo gị Apple TV ka n'ụzọ ziri ezi jikọọ gị Mac, ị pụrụ ịhụ na ọ n'okpuru Ngwaọrụ na iTunes. Họrọ ọ na-aga Movies taabụ nyefee iPhoto ngosi mmịfe ka ATV. Lee otú jikọọ gị Apple TV site cables.
Ugbu a na ị nwetara iPhoto ngosi mmịfe na gị Apple TV, ị nwere ike mfe ịhụ na ọ si TV menu ma kpọọ ya dị ka a amara. Na-ewere Apple TV 2nd ọgbọ ihe atụ, i nwere ike na-aga "Computers" na gị na Apple TV menu, chọta iPhoto ngosi mmịfe video ị na synced ka Apple TV, họrọ ya na-egwu.
Rịba ama: Ị pụrụ nanị ike ụfọdụ dị mfe foto slideshows site iPhoto. Iji mee ka gị onwe gị na ngosi mmịfe na pụtara mmetụta, a ọkachamara ngosi mmịfe onye dị ka Wondershare Fantashow bụ a mma. Ọ na-abịa anya-akụta ngosi mmịfe gburugburu n'ihi na ị na-agbanwe foto na music Intro Fantastic fim dị ka a pro. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwere ike mfe mbupụ ngosi mmịfe na na na na Apple TV. Guide nke Fantashow >>
> Resource> Atụmatụ> Olee otú Mee a iPhoto ngosi mmịfe na na na Apple TV